ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - World Trade Exchange
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအန္တရာယ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များမှကာကွယ်ရန်။
သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၊ ROI မရှိခြင်း၊ ဆုံးရှုံးမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ပျက်ကွက်လျှင် IPP ကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၁၀၀% ၏ဘဏ္projectာရေးလျော်ကြေးကို ၂၄ နာရီအတွင်းရရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်အန္တရာယ်များရှိသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည်မတည်ငြိမ်မှုများ၊ စျေးကွက်တန်ဖိုးအတက်အကျများ၊ လိမ်လည်မှု၊ ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်ကျရှုံးမှုအန္တရာယ်များနှင့်အမြဲတမ်းများပြားသည်။
သင်ဟာလူအများစုနဲ့တူတယ်ဆိုရင်၊ ဒါကသင်မစဉ်းစားချင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဘာမျှမမှားတော့ကြောင်းသင်အာမခံနိုင်ပါသလား။ မဟုတ်ဘူး! သို့ဖြစ်လျှင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအကာအကွယ်မပေးဘဲဘာကြောင့်လမ်းလျှောက်သွားရသနည်း။
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်မနက်ဖြန်၊ နောက်အပတ်သို့မဟုတ်ယခုမှ စ၍ မည်သည့်အရာမှားယွင်းနေသည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှသေချာမသိသောကြောင့်သင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်မှုလိုအပ်သည်။ သမ္မာသတိရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်လုံလောက်သောကာကွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များ၏သက်ရောက်မှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရှိရာဤသူကားအ WTE ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဘာလဲ wte ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကိုအန္တရာယ်များ၊ ကျရှုံးမှုများ၊ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များမှကာကွယ်ပေးသည်။
၂၄ နာရီအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးအတွက်လျော်ကြေးပေးပါ။ ရှည်လျားသောတရားဝင်တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမရှိပါ။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းတွင်အချိန်၊ အလုပ်သို့မဟုတ်အားထုတ်မှုမလိုအပ်ပါ။
သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလျံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလျံနှင့်အထက်ရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်စီးပွားရေး၊ အစုရှယ်ယာ၊ ဘဏ်ထုတ်ကုန်များ၊ အိမ်ခြံမြေ / ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ရွှေနှင့်ငွေ၊ ရွေးချယ်စရာများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများ၊ ရည်ညွှန်းရန်ပုံငွေများ၊ အပ်ငွေလက်မှတ်များ (စီဒီများ)၊ cryptocurrencies၊ ကုန်ပစ္စည်းအနာဂတ်၊ လုံခြုံရေးအနာဂတ်၊ အာမခံထုတ်ကုန်များ၊ အဖိုးတန်အရာဝတ္ထုများ၊ အရင်းအနှီးများ၊ နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးများ၊ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရန်ပုံငွေများ (ETFs) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့်ရှည်လျားသောတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အချိန်၊ အလုပ်များသို့မဟုတ်အားထုတ်မှုများမရှိဘဲ ၂၄ နာရီအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးအတွက်လျော်ကြေးပေးလိမ့်မည်ဟု IPP ကအာမခံသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်မှုသည်သင် (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ) မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ပေးသည် WTE အခြေခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းနေပါကသို့မဟုတ်သင့်မျှော်လင့်ချက်များအောက်တွင်သာလုပ်ဆောင်ပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်နှိုက်အတွက်လျော်ကြေးငွေအပြည့်အ ၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စတော့ဈေးကွက်စျေးကွက်လိမ်လည်မှု၊ စျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှု၊ ပြissueနာမတိုင်မီစျေးနှုန်းအတုနှင့်စျေးနှုန်းကိုင်တွယ်ခြင်း
အတွင်း - ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ပွဲစားများနှင့်ပွဲစားများ၏မမျှတသောကုန်သွယ်မှုအလေ့အကျင့်များ
ငွေနှင့်လုံခြုံရေးဆုံးရှုံးမှု - စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ငွေချေးစာချုပ်များ
မကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပြုဘို့ပွဲစားတစ် ဦး ဆန့်ကျင်တောင်းဆိုမှုများ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများ၊ နိုင်ငံခြားခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ ခိုးမှု၊ စနစ်တကျကျရှုံးမှု၊ အစိုးရ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများသို့မဟုတ်သင်မထိန်းချုပ်နိုင်သောနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း။
ထိုကဲ့သို့သော Bitcoin အဖြစ်အခြားရွေးချယ်စရာငွေကြေးသို့မဟုတ် cryptocurrencies ၏တန်ဖိုးကျဆင်းမှု
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ စီမံကိန်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်တွင်မဆိုဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလျံအရှုံးပေါ်မှုရှိခဲ့လျှင်၊ WTE သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်အရှုံးအကြောင်းကြားသောအခါသင့်အားဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။
သင်၏ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၇ ဘီလီယံကျဆင်းမှုကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရသည်ဆိုပါစို့။ အဲဒီလိုဆိုရင် WTE မင်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကျဆင်းသွားတာကိုမင်းကမင်းကိုဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံပေးပြီးသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်။
မည်သည့်ချေးသို့မဟုတ်စာရင်းရေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါကသင့်ရဲ့မြို့တော်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြောင်းသေချာ; ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးများကိုစွန့်စားရမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ ပျက်ကွက်မှု၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ စျေးကွက်တန်ဖိုးအတက်အကျနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများမှမည်သည့်အဖြစ်အပျက်မှမဆိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
WTE ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ခြင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမဆိုရှောင်ကြဉ်နိုင်သည် WTE အခြေခံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ။
ကန်ထရိုက်၊ ဘဏ္financialာရေး၊ ချေးငွေ၊ စျေးကွက်၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှု၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ဥပဒေရေးရာ၊ သဘာဝ၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်အားလုံးကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုသင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ရှုံးနိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုပါစို့။ ထိုကိစ္စတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ကုမ္ပဏီကဒေဝါလီခံလျှင်သို့မဟုတ်ဒေဝါလီခံရလျှင်ပင်သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအားလုံး၏အပြည့်အ ၀ ငွေပြန်အမ်းရန်သင့်အား 100% အာမခံထားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအားမကောင်းသောအန္တရာယ်များမှရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးသောဘဏ္financialာရေးအခက်အခဲများရှိသည့်ကုမ္ပဏီများကိုသတိပြုမိစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်သည်ထိတွေ့မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း၌၎င်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေနိုင်သည်။
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးအပေါ်မြင့်မားသော ROI ကိုအာမခံနိုင်သည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီ 'ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်' မှတစ်ဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ အာမခံနိုင်သည့်အမြတ်အစွန်းကိုရရှိခြင်းဖြင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး၏အောင်မြင်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုအာမခံနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရှိရန်နှင့်သူတို့၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည် - အလွန်အန္တရာယ်ကြီးလွန်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုအကာအကွယ်ပေးသည်ဆိုပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၁၀X ထက်ပိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပိုမိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ၁၀၀၀% အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားထူးခြားသောပို့ကုန်အန္တရာယ်များမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပြီး၊ တိုင်းပြည်အသစ်များသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်စွန့်စားမှုမှမရှိဘဲလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာများထက်တင်သွင်းသူများအားပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အသုံးအနှုန်းများကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ဆွဲဆောင်မှု BANK ဘဏ္getာရေးရ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဘဏ်များနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာငွေကြေးအတွက်အခြားချေးငွေများကိုလုံခြုံရေးပေးခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ငွေချေးသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေသည် ပုံမှန်အားဖြင့်ဘဏ်များသည်အကာအကွယ်ပေးထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဏ္termsာရေးအသုံးအနှုန်းများဖြင့်အရင်းအနှီးပိုမိုချေးယူလေ့ရှိသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်သင်၏ဘဏ်၊ အလားအလာရှိသောငွေချေးသူများ၊ သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေပါကသင့်အား IPP မှတစ်ဆင့်လျော်ကြေးပေးရန်သင့်တွင်အာမခံနိုင်သောနည်းလမ်းရှိသည်။
အထွက်နှုန်းမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာအမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောပြန်လာခြင်းသည်မကြာခဏဆိုသလိုပြန်လာခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုများလက်ချင်းယှဉ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်ကိုဆိုလိုသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကာအကွယ်ပေးရေးအစီအစဉ်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်များမရှိဘဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိနိုင်သည်။
သင်၏ဝင်ငွေ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု၊ အရင်းအနှီးနှင့်အလုပ်အကိုင်တို့ကိုကာကွယ်ပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်ရောင်းရငွေကျဆင်းခြင်း၊ ငွေစီးဆင်းမှုနည်းခြင်း၊ အမြတ်အစွန်းနည်းခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများမှကာကွယ်ပေးသည်။ 'ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်' ဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရသောဝင်ငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းကို ၁၂ လကျော်အာမခံနိုင်ပြီးမသေချာမရေရာမှု၊ ရှုံးနိမ့်မှု၊ ရောင်းအားနည်းခြင်း၊ ငွေစီးဆင်းမှုနည်းခြင်း၊ အမြတ်နိမ့်ခြင်း၊
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်မမျှော်လင့်သောဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါကလျော်ကြေးငွေပေးပြီးသင်၏ဝင်ငွေများ၊ အမြတ်အစွန်းများ၊ ငွေလက်ကျန်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားငွေကြေးအရဆိုးဝါးသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်း၊ ငွေစီးဆင်းမှု၊ အရင်းအနှီးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများကိုသေချာစေရန်အတွက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပညာအရှိဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်နိုင်သည်။
LUCKIN ကော်ဖီကုမ္ပဏီမှပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ ၁၅၀ မီလီယံရှိသည်
Luckin ကော်ဖီကုမ္ပဏီသည် ၀ င်ငွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်လည်ပတ်မှုအရှုံးများကိုအမြတ်အစွန်းပိုမိုများပြားလာပြီးအမှန်တကယ်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပုံဖော်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် 2019 Aprilပြီလမှ 2020 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိကုမ္ပဏီများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ NASDAQ တွင် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်အထိအစုရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ခဲ့သည်။ uckပြီလတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအရှုပ်တော်ပုံနှင့်ဇူလိုင်လတွင်ဖျက်သိမ်းခဲ့သောအချိန်ကြားတွင် Luckin ၏စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုး၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတွင်၎င်း၏ရှယ်ယာဈေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၅၀ ခန့်ရှိသည်။ Aprilပြီလကစာရင်းကိုင်အရှုပ်တော်ပုံကြောင့်၎င်းသည်ရှယ်ယာတစ်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာအောက်သာကျဆင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ဒေါ်လာ ၁၅၀ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး ၁၅ မီလီယံသို့ကျဆင်းသွားသည်။ WTE ဖောက်သည်အားဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ ပေးချေခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူတို့တင်ပြသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးအပြည့်ဖြစ်သည်။
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလျံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကရေနံစျေးနှုန်းသိသိသာသာကျဆင်းမှုကရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနေနှင့်အချို့သောရေနံကုမ္ပဏီများမှကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကန်ဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံအထိကျဆင်းခဲ့သည်။ WTE ဖောက်သည်အား၎င်းအကြောင်းကြားသောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၁၈ ဘီလျံဒေါ်လာပြန်လည်ရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လေကြောင်းလိုင်းရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံအထိကျဆင်းခဲ့သည်။ WTE ဖောက်သည်အား၎င်းတို့တင်ပြသောအခါသူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကိုပေးချေခဲ့သည်။
ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုမှ ၇၈.၉% မှပြန်လည်ရရှိသောအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ပြည်ပအိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးမြှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုသည် ၇၈.၉ ရာခိုင်နှုန်းမှမကြာသေးမီကဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ အထိရှိသည်။ တတိယသုံးလပတ်တွင်သိသိသာသာကျဆင်းမှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေသည့် Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သည်။ WTE ဖောက်သည်အား၎င်းတို့တင်ပြသောအခါသူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကိုပေးချေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးသည်-ပြီ - ဇွန်သုံးလပတ်တွင် ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးဇူလိုင် - စက်တင်ဘာလတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၇၅ ဘီလီယံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခင်နှစ်ကထက် ၄၉.၇ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာတတိယဆက်တိုက်သုံးလတစ်ကြိမ်ကျဆင်းမှုမှတ်သား။ WTE ဖောက်သည်အား၎င်းတို့တင်ပြသောအခါသူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကိုပေးချေခဲ့သည်။
ဆုံးရှုံးမှု ၄၈% မှပြန်လည်ရရှိသောချေးငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူ၏ချေးငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီမှနို ၀ င်ဘာလအတွင်းဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံသို့ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ WTE ဖောက်သည်အား၎င်းတို့တင်ပြသောအခါသူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကိုပေးချေခဲ့သည်။
ကုန်သွယ်ရေးဘဏ်သည် ၂၄ နာရီအတွင်းတန်ဖိုးပြည့်စာရင်းတွင်ဒေါ်လာ ၂ ဒBမ ၂ ဘီလီယံဖိုးပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
၂၄ နာရီအတွင်းကုန်သွယ်ရေးဘဏ်တစ်ခုသည်ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိချေးငွေများကိုစာအုပ်အပြည့်ဖြင့်ပြန်လည်ရယူခဲ့သည် WTE.
ရုန်းကန်နေရသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်သည် ၅,၅၀၀% နှင့်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကို ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လျှော့ချပေးခဲ့သည်။
ရုန်းကန်နေရသောကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီသည်စျေးကွက်အသုံးစရိတ်မရှိဘဲရက် ၃၀ အတွင်းရောင်းအား ၅၅၀၀% တိုးလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်လစဉ်ဝယ်ယူမှုများကိုတိုးမြှင့်စဉ်ဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ငွေထွက်ငွေများကို ၈၇% လျှော့ချခဲ့သည်။